ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: March 2008
(Reader’s Digest, July 1957) မှ ဆရာ ဖေမြင့် ဘာသာပြန်ထားကို ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
၁၉၁၆တွင် ၀စ္စကွန်ဆင်ပြည်နယ် ဝေါ်ကီရှာမြို့၌ မွေးဖွားသည်။
ရေဒီယို၌ ကျေးလက်တေးများ တီးခတ်သီဆိုရင်း စတင် နာမည်ရခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဂျပ်ဇ်ဂီတဘက်သို့ ကူးပြောင်းကာ လက်(စ)ပေါလ် သုံးယောက်ဝိုင်းကို ဖွဲ့စည်းသည်။ ၁၉၃၈ မှ ၁၉၄၁ အတွင်း နာမည်ကြီး ဖရက်(ဒ)၀ါရင်းအဖွဲ့နှင့် လိုက်ပါ ဖျော်ဖြေရင်း သုံးယောက်ဝိုင်း ပို၍ လူသိများလာသည်။ ၁၉၄၂တွင် ဟောလိဝုဒ်သို့ ရောက်သည်။
၁၉၅၀ ကျော်နှစ်များအတွင်း သူ အထူးကျော်ကြား အောင်မြင်လာသည်။ အဓိကက ဇွဲနပဲကြီးကြီးနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် သူ၏ စမ်းသပ်တီထွင်မှုများကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဂစ်တာဖြင့် မာလတီပယ် ရီကော့ဒင်းများ သူ စတင်ပြုလုပ်သည်။ ဆောလစ် လော့ဂ် ဂစ်တာကို တီထွင်သည်။ လျှပ်စစ်ဂစ်တာ ရေပန်းစားအောင် သူကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
ဇနီး မေရီဖို့ဒ်နှင့် တွဲဖက်၍ ထင်ရှားသော ဓာတ်ပြား အချပ်ပေါင်းများစွာ သွင်းခဲ့ပြီး ရုပ်မြင်သံကြားတွင်လည်း နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာအောင် ပူးတွဲ တင်ဆက်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းကာလ၌ လျှပ်စစ်ဂစ်တာအား ပို၍ ပီပြင်ထက်မြက်သော တူရိယာပစ္စည်း ဖြစ်အောင် မွမ်းမံပြုပြင်သော အလုပ်ကိုပင် နှစ်မြှပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
"ကိုယ် တကယ် လုပ်မကြည့်သေးဘဲနဲ့ ကျွန်တော် လုပ်မရဘူးလို့ ဘယ်တော့မှ မပြောနဲ့"
အဲသည်နေ့တုန်းက အလုပ်သမားတွေ မြောင်းတူးနေကြသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်က မြောင်းကို စိတ်မ၀င်စား။ နေ့လယ်စာ စားရန် သူတို့ နားကြသည့်အချိန် ဆံပင်ဖြူကျိုးကျဲနှင့် အလုပ်သမားကြီး တစ်ယောက် သူ့ဘာဂျာဟောင်းလေး ထုတ်ပြီး မှုတ်သည့်အခါမှသာ ကျွန်တော် အံ့သြသဘောကျကာ ငေးကြည့်နေမိသည်။ အဲသည်တုန်းက ကျွန်တော် ကျောင်းသားလေးပဲ ရှိသေးသည်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲတွင် "ငါသာ ဒီလိုမှုတ်တတ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ" ဟုတွေးနေမိသည်။
သည်အခိုက် အလုပ်သမားကြီးက ဘာဂျာကို ကျွန်တော့်ဆီ ရုတ်တရက် ထိုးပေးသည်။
"လုပ်ကွာ ချာတိတ် ၊ မှုတ်ကြည့်စမ်း"
"ကျွန်တော် မမှုတ်တတ်ဘူး ခင်ဗျ" ကျွန်တော်က ငြင်းသည်။
လူကြီးက ကျွန်တော့်ကို တချက်စိုက်ကြည့်သည်။
ပြီးတော့မှ "ဘယ်ဟုတ်မလဲ ကလေးရ၊ မှုတ်သာကြည့်စမ်းပါ၊ တော်ကြာတော့ မင်းကျွမ်းသွားမှာ" ဟုဆိုသည်။
အဲသည်နောက် သူက ကျွန်တော့်တသက်တာအတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံး စကားတစ်ခွန်းကို ဆိုသည်။
"ကိုယ် တကယ်လုပ်မကြည့်သေးဘဲနဲ့ ကျွန်တော်လုပ်မရဘူးလို့ ဘယ်တော့မှ မပြောနဲ့ကွ" ဟူ၍။
တနေ့မှာ စန္ဒရားဆရာက အမေ့ထံ စာတစ်စောင် ကျွန်တော်နှင့် ပေးပါသည်။ စာက ကျွန်တော်နှင့် ပတ်သက်၍ မညှာမတာ ရေးထားသည့်စာ။
"ခင်ဗျားရဲ့သား လက်စတာဟာ ဂီတပညာ ဘယ်တော့မှ သင်လို့ တတ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်တော် သူ့ကို နောက်ထပ် မသင်နိုင်တော့ပါ" တဲ့။
သည်စာ ဖတ်ပြီးနောက် အလုပ်သမားကြီး ပြောခဲ့သောစကားကို ကျွန်တော် ပြေးသတိရသည်။
စင်စစ် ကျွန်တော်နောက်မဆုတ်ချင်ပါ။ ကျွန်တော်ဂီတပညာ သင်၍ မရနိုင်ဆိုတာ သေချာအောင်မှ စမ်းသပ်မကြည့်ရသေးတာ။ သင်လို့ရတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်အောင် ငါ ကြိုးစားမယ်ဟု ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
အဲသည်နှစ်မှာ ကျွန်တော် ကိုယ့်ဘာသာ ဂစ်တာအတီး သင်သည်။ ကျွန်တော့်အိမ်နားမှာ ဂစ်တာသမားတစ်ယောက်ရှိရာ အဲသည်လူ တီးသည့်အခါ ဘေးက အသေအချာကြည့်ပြီး ကြိုးခြောက်ကြိုးပေါ်မှာ လက်ချောင်းလေးတွေ ဘယ်အနေအထား ထား၍တီးလျှင် ဘယ်အသံထွက်သည်ဆိုတာ မှတ်သားကာ ၄င်းအတိုင်း ထပ်တူလိုက်တီး ကြည့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်ယူရသည့်ချိန်တာက ရှည်ကြာလှပါသည်။ သို့သော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်အဖို့တော့ ကိုယ် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် တီးခတ်နိုင်မည့် တူရိယာပစ္စည်းတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အသက်နှစ်ဆယ် အရွယ်မှာ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့် ဂျပ်ဇ်ဂစ်တာကို ပင်တိုင်ထားပြီး သုံးယောက်ဝိုင်းတစ်ခု ဖွဲ့စည်းသည်။ ပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားလာရမည်ဟူသော ရည်မှန်းချက်နှင့် နယူးယောက်သို့ တက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် နယူးယောက်ရောက်တော့ နာမည်ကြီးတီးဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေက ကျွန်တော်တို့လို ရွက်ပုန်းသီး ပညာသည်တွေကို ကောင်းကောင်းပင် မဆက်ဆံချင်ကြတာ ကျွန်တော်တွေ့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့ လက်သံကို မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ပင် အချိန်မပေးနိုင်လောက်အောင် သူတို့အလုပ်များနေကြသည်။
တနေ့ ဘရော့ဒ်ဝေး သဘင်ဂီတ လမ်းမ အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခု၏ ကော်ရစ်ဒါမှာ ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်အဖွဲ့ ထိုင်စောင့်နေဆဲ နာမည်ကြီး ပင်ဆီလ်ဗေးနီးယင်းအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် ဖရက်(ဒ)၀ါရင်း ဓာတ်လှေကားဆီသို့ လျှောက်သွားတာ ကျွန်တော်လှမ်းမြင်သည်။ ရုတ်တရက်ပင် ကျွန်တော် သည်လူ့ကို သည်နေရာမှာပဲ တီးပြလိုက်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်အဖွဲ့သားတစ်ယောက်က လန့်သွားသည်။
"ဟ ဒီနေရာကြီးမှာ ဖြစ်ပါ့မလားကွ"ဟု ဆိုသည်။
"တကယ်ဖြစ်၊ မဖြစ် သေချာအောင် စမ်းကြည့်တာပေါ့ကွာ" ကျွန်တော်ပြောရင်း ဂစ်တာကို ကောက်ကိုင်လိုက်သည်။
ကံအားလျော်စွာ ဓာတ်လှေကားကလည်း ကြာနေသည်။ ကျွန်တော်တို့လက်သံကို ကြားရသောအခါ ဖရက်(ဒ) အံ့အားသင့်သွားသည်။ ဓာတ်လှေကား ရောက်လာ၍ လှေကားထဲ သူမ၀င်မီမှာပင် ကျွန်တော်တို့ "လက်(စ)ပေါလ် သုံးယောက်ဝိုင်း" ကို သူငှားရမ်းပြီး ဖြစ်သွားလေသည်။
ထို့နောက် နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာအောင် ကျွန်တော် ညစဉ်ညတိုင်း ဂစ်တာကို အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ တီထွင်စမ်းသပ် တီးခတ်နေခဲ့သည်။ သည်တူရိယာပစ္စည်း တကယ်ထူးခြား ပေါ်လွင်လာအောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့် နည်းနာများ ကျွန်တော် မပြတ်ရှာဖွေခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဂစ်တာတစ်လက်တည်းနှင့်ပင် ဂစ်တာများစွာပါဝင်သော သံစုံတီးဝိုင်းကြီးတစ်ခုမှ ထွက်လာသည့်အသံမျိုး ရအောင် ဖန်တီးရန် နည်းလမ်းကို ကျွန်တော် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်အတွက် ရစ်သမ်၊ မယ်လိုဒီ၊ ဟာမိုနီ၊ ဘက်ဂရောင်း စသည်တို့ကို တခုချင်း သီးခြားစီ တီးခတ်ပြီး အသံသွင်းယူသည်။ ထို့နောက် ၄င်းဓာတ်ပြားများအားလုံးမှ အသံစုံကို ဓာတ်ပြားတစ်ချပ်တည်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ထည့်သွင်းသည်။ ဤသည်ကား ယခုအခါ မာလတီပယ်(Multiples)ဟု လူသိများနေပြီ ဖြစ်သည့်နည်း ဖြစ်ပါသည်။
ပထမဆုံး မာလတီပယ်လ် ဓာတ်ပြားများ သွင်းရန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖြစ်ပြီးနောက် မိသားစုထံ အလည်ပြန်ခဲ့သည်။ အိမ်မှာ ကောင်းကောင်းအနားယူပြီး အပြန်လမ်းတွင် ကားဘီးချော်ပြီး လမ်းဘေး ထိုးကျသည်။ ဆီးနှင်းတွေထဲမှာ ရှစ်နာရီလောက် ကြာပြီးမှ ကျွန်တော့်ကို တွေ့ကြကာ လူနာတင်ယာဉ်နှင့် ဆေးရုံသို့ ယူဆောင်ကြသည်။
ဆေးရုံက လူနာမှတ်တမ်းမှာ ရေးသားထားသည့် ကျွန်တော့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာစာရင်းက ကြောက်စရာ ရှည်လျားလွန်းလှသည်။ ကျောရိုးဆစ် တချို့ ကျိုးသွားသည်။ ပခုံးနှစ်ဖက်လုံး ကျိုးသွားသည်။ နှာခေါင်းရိုး ကျိုးသည်။ ညာဘက် လက်မောင်းရိုးက သုံးနေရာတိတိ ကျိုးသွားသည်။ အဲသည်နောက် နံရိုး အတော်များများ၊ တင်ရိုးခွေ၊ ပြီးတော့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံး။
တနေ့ နံနက်မှာ ဆရာဝန်တွေ ကျွန်တော့် ညာလက်မောင်းရိုးက ကျိုးကြေသွားတာတွေ သိပ်များနေသဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ အလွန်ခဲယဉ်းနေကြောင်း သုံးသပ်ကြသည်။ သည်လက်ကို ဖြတ်ပစ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်လေမလား သူတို့ ဆွေးနွေးကြသည်။
သူတို့ ပြောဆိုကြသည့် စကားများ၏ အနက် အဓိပ္ပာယ် အပြည့်အ၀ကို သေချာစွာ စေ့ငုနေမိသည့်အချိန် အခန်းထဲမှာ ကျွန်တော် နောက်ထပ် ဘာသံမျှ မကြား။ ကျွန်တော် စဉ်းစားနေမိသည်က လက်မောင်းရင်းကသာ ဖြတ်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော့် ဂစ်တာသမားဘ၀ ဆုံးပြီ။ ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့သမျှ သဲရေကျပြီ ဆိုတာပဲ ဖြစ်သည်။ ခုတင်ပေါ်မှာ လဲလျောင်းရင်းကပင် အတိတ်ကာလဆီသို့ ကျွန်တော် လွင့်မျောရောက်ရှိသွားသည်။ ဘာဂျာဟောင်းလေးကို မှုတ်နေသည့် မြောင်းတူးအလုပ်သမားကြီးဆီသို့။ ယခုအချိန်ထိ ကျွန်တော် ရရှိခဲ့သမျှ အောင်မြင်မှုသည်လည်း သူပေးသည့် အကြံဉာဏ်အတိုင်း လိုက်နာခဲ့ခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ ဆံဖြူကျိုးကျဲနှင့် သူ့ရုပ်သွင်ကို ကျွန်တော်ပြန်မြင်လာသည်။ သို့နှင့် ကျွန်တော့်ခုတင်နှင့် အနီးဆုံးမှာရှိသည့် ဆရာဝန်ကို လှမ်းပြောသည်။
"ကျွန်တော် ပြောပါရစေဆရာ၊ ဒီလက်မောင်းကို ဆရာတို့ တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားကြည့်ကြပါဦး။ လုံးဝ မရတော့ဘူးဆိုတာ သေချာတော့မှပဲ မရဘူးလို့ လက်လျှော့ကြရအောင်လား ဆရာ’"
သည်နောက်မှာတော့ ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် ခွဲစိတ်ကြသည်။ ခြေထောက်က အရိုးကို လက်မောင်းဆီ ဆက်ပွားနိုင်ပြီးတော့မှသာ လက်တစ်ချောင်းလုံး ဖြတ်ပစ်ရတော့မည့် အန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်သွားတော့သည်။ သို့သော် တံထောင်ဆစ်နေရာမှာ ပြဿနာကျန်နေသေးသည်။ တံထောင်ဆစ်နားတွင် အရိုးတွေ ကြေမွသွားသည်ဖြစ်ရာ အဲသည်နေရာတွင် သတ္တုပြားတစ်ခု အစားထိုးပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရသည်။ သည်နေရာမှာ အကွေးအဆန့်လုပ်၍ ရမည်မဟုတ်တော့။ ကွေးလျှင် အကွေးအတိုင်း၊ ဆန့်လျှင် အဆန့်အတိုင်း တသမတ်ရှိတော့မည်ဖြစ်ရာ ဆရာဝန်များအား ကျွန်တော် ဂစ်တာတီးရန် အဆင်ပြေသည့် အနေအထားအတိုင်း ထားပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုက်သည်။
တကယ် ဂစ်တာတီး၍ ရ၊ မရ သေချာအောင်ကား တစ်နှစ်ခွဲလောက် ကြာအောင် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ သို့သော် မရဘူး ဆိုတာ မသေချာမချင်း လက်မလျှော့ဘူးဟူသော မူဝါဒကို လက်ကိုင်ထားသူပီပီ အဲသည် စောင့်ဆိုင်းနေရစဉ် ကာလအတွင်းမှာ တေးသွားတွေ၊ တီးကွက်တွေကို ခေါင်းထဲမှာပဲ စဉ်းစားသည်။ စီစဉ်သည်။ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ စမ်းသပ်တီးခတ်ကြည့်နေသည်။
တဖြည်းဖြည်း ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ ဧရာမ လောင်းပလေး ဓာတ်ပြားကြီး တစ်ချပ် တည်ဆောက်မိလာသည်။ ကျွန်တော်ဂစ်တာ သေသေချာချာ ပြန်ကိုင်နိုင်သည့်အချိန် တီးခတ်မည့် ဂီတသံစဉ်တွေအားလုံး သည်ဓာတ်ပြားကြီးထဲမှာ သိုမှီးထားသည်။ သည်လိုနှင့် နောက်ဆုံး ကျောက်ပတ်တီး ဖြည်ရမည့်အချိန် ဆိုက်ရောက်လာပါသည်။
အဲသည်နောက်တွင် လုံးဝ အချိုးမကျဖြစ်နေသော ကျွန်တော့်ညာဘက်လက်ကို အရင်တုန်းက သူတတ်ခဲ့သမျှတွေ ပြန်လုပ်တတ်အောင် ခဲယဉ်းပင်ပန်းစွာ ပြန်လည်သင်ကြားခြင်း ပြုရပါသည်။ ထို့နောက် သုံးယောက်ဝိုင်းတစ်ခု ထပ်မံ ထူထောင်ကာ နယ်ပွဲစဉ်များ စတင်သည်။
သည်လိုလုပ်ဖြစ်ရန်အတွက် ကျွန်တော် အတော်ကြီး သတ္တိမွေးခဲ့ရသည်။ ဇွဲကြီးကြီးနှင့်လည်း အားထုတ်ခဲ့ရပါသည်။ ယခင်ပုံမှန်အနေအထား ရောက်အောင် ကျွန်တော်ပြန်လုပ်နိုင်၊ မလုပ်နိုင် ဆိုသည်က စင်ပေါ် တကယ်တက်ကြည့်မှ သေချာပေါက် သိနိုင်မည် မဟုတ်လား။
တစ်မြို့ပြီး တစ်မြို့၊ တစ်ပွဲပြီး တစ်ပွဲ ဆက်တိုက်ကူးကာ တစ်နှစ်လောက်ကြာအောင် ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့သည်။ အလွန်ပင်ပန်းသည်။ သို့သော် အဲသည်ပြင်းထန် ကြမ်းတမ်းလွန်းသော ခရီးစဉ်က အကျိုးရလဒ် ကြီးမားခဲ့သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရမီက လက်ကို မီအောင် ကျွန်တော် ပြန်လည် တီးခတ်လာနိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော် ဓာတ်ပြားတွေ ပြန်သွင်းဖြစ်သည်။ သည်အခါမှာတော့ ကျွန်တော့် ဂစ်တာသံမှာ ဇနီးသည် မေရီဖို့ဒ်၏ အဆိုပါ တွဲဖက် ပါဝင်လာပြီ။ ကျွန်တော့်တို့ ဇနီးမောင်နှံ၏ ဓာတ်ပြားတွေကို တကမ္ဘာလုံးက နှစ်ခြိုက်စွာ နားသောတ ဆင်ကြသည်။ ဓာတ်ပြား ချပ်ပေါင်း ၁၇ သန်းကျော်မျှ ၀ယ်ယူအားပေးခဲ့ကြသည်။ အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည်က လူငယ်များလောကတွင်လည်း ဂစ်တာ ဆိုသော တူရိယာပစ္စည်းက အကြီးအကျယ် ရေပန်းစားကာ အားတက်သရော လေ့ကျင့်တီးခတ်လာခဲ့ကြသည်။
များမကြာမီကမူ မိတ်ဆွေ ဂီတသမားတစ်ယောက် ကျွန်တော့်နည်းတူ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်အနာတရ ဖြစ်သည့်အကြောင်း ကြားသိရသည်။ သူက စန္ဒရားသမား ဖြစ်သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် စန္ဒရားလုံးဝ မတီးနိုင်တော့ပြီ။ ဂီတပညာရှင်ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်ရတော့မည်ဟု ကြားရသည့်အခါ ကျွန်တော် သူ့ကို စာတွေ အစောင်စောင်ရေးကာ ဂီတကို မစွန့်လွှတ်ဖို့၊ ပြန်လည်ကြိုးစားကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းသည်။
"ကျွန်တော် မတတ်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာ" သူ့ထံမှ စိတ်ပျက်စွာ အကြောင်းပြန်လာသည်။
"မတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သေချာလား၊ သေချာအောင် ခင်ဗျား စမ်းကြည့်ပြီးပြီလား" ဟူ၍ပဲ ကျွန်တော် ထပ်တလဲလဲ ပြန်မေးသည်။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့်တိုက်တွန်းမှု အောင်မြင်သွားသည်။ သူ စန္ဒရား ပြန်တီးသည်။ မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့သော အနေအထားမှနေ၍ တောက်ပသော အနာဂတ်တစ်ခု သူ ပြန်လည် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။
သည်လိုပဲ တစ်ကြိမ်မဟုတ် တစ်ကြိမ် ကျွန်တော်တို့ဘ၀တွေမှာ အုတ်နံရံကြီး ကာဆီးထားသလို ခက်ခဲသော အနေအထားမျိုး ကြုံရတတ်ပါသည်။ ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းမရှိတော့ပြီဟု ထင်ရသည့် ပြဿနာမျိုး။ ဆောင်ရွက်ရန် လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဟု ယူဆရသော လုပ်ငန်းတာဝန်မျိုး။
သည်အနေအထားမျိုး ကြုံရသောအခါ ငါ မတတ်နိုင်ဟု အလွယ်တကူ မပြောပါနှင့်။ ငါ မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာသလား လက်တွေ့ စမ်းကြည့်ပါ။ မတတ်နိုင်တာ တကယ်သေချာပါပြီ ဆိုတော့မှသာ လက်လျှော့ပါ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အနေနှင့်မူ ငယ်စဉ်က တွေ့ဖူးသည့် မြောင်းတူးသူအလုပ်သမားကြီး၏ ကျေးဇူးကြီးမားလှသော သြ၀ါဒစကားကို လိုက်နာခဲ့သည့် အကျိုးကြောင့် ကျောက်တုံးကျောက်ခဲနှင့် တည်ဆောက်ထားသည့် နံရံတံတိုင်းဟူသည်လည်း နာနာ ဖိတွန်းလျှင် တချိန်မှာ ပြိုလဲသွားနိုင်သည်ဆိုတာ တွေ့မြင် သိမြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်4 ခု ရေးပြီးချိန်: 3/29/2008 10:45:00 AM
မဖြစ်သင့်ဘူး၊ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ငြိမ်နေတာထက်
ဖြစ်ချင်တာကို ထလုပ်ကြည့်တာ မကောင်းဘူးလား။
စိတ်ဆိုး၊ စိတ်ညစ်၊ ၀မ်းနည်း အားငယ်...
ပြီးတော့ (တခါတလေ) တက်ကြွ၊ ပျော်ရွှင်၊ ကြည်နူး။
ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက် မရှိမဖြစ်လို့ ထင်နေတဲ့ အရာတခုဟာ
နောင်တချိန်မှာ ဘာမှ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ သိလိမ့်မယ်တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ခေါင်းရှုပ်ခဲ့ရပေါင်း များနေပါပြီ။
တွေဝေ၊ ဒွိဟ၊ ချီတုံချတုံ...
နောက်ဆုံးတော့ ငါ ဒီဘ၀မှာ မနေပျော်ခဲ့တာ ကြာပြီ။ ။
And prepare for the future without fear!
အဲဒီစကားလုံးတွေအတိုင်း ကျင့်သုံးနိုင်ရင်လည်း ကောင်းသား...
မှတ်ချက်2 ခု ရေးပြီးချိန်: 3/26/2008 11:37:00 PM
မချစ်လေပြေက ကျွန်မကို လက်တွဲဖော် အကြောင်းရေးဖို့ တက်ဂ်ထားတာကြာပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မက ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ ခုမှ ရေးဖြစ်တာ။ မလေပြေက အွန်လိုင်းလည်း မတက်၊ သူ့ဘလော့ဂ်ကိုလည်း ပိတ်ထားတော့ ဘယ်လိုရေးထားမှန်း မသိရ ဖြစ်နေရာက နောက်ဆုံး ဖုန်းနဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပြီး လှမ်းမေးလိုက်ရတော့တယ်။ အဲဒါနဲ့ ကိုစိုးထက်၊ မနုစံ၊ မလေးမ စတဲ့ ဘလော့ဂါတွေရဲ့ ပို့စ်တွေ ဖတ်ပြီးသကာလ ကိုယ်ရေးချင်တာ ကောက်ရေးမိပါတယ်။
ဘ၀လက်တွဲဖော်ဆိုတာကို ဘယ်လို စိတ်ကူးနဲ့ စဉ်းစား ရွေးချယ်မလဲဆိုတာ တော်တော် ဖြေရခက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်တုန်းကမှ သေချာ မစဉ်းစားမိလို့ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူက ဘယ်လိုမျိုး ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ ၁၉၊ ၂၀ အရွယ်တုန်းက တွေးမိတာလေးတွေ ရှိတယ်။ ခပ်ငယ်ငယ် အရွယ်က အတွေးတွေဆိုတော့ (ကျွန်မအတွက် ခုချိန်ထိ သိပ်မပြောင်းလဲသေးပေမဲ့) သူများတွေအတွက် ရယ်စရာ ဖြစ်နေမလားပဲ။
အမှတ်စဉ်ထိုးပြီး ကျွန်မ ချရေးထားပေမဲ့ အားလုံးဟာ တပြေးညီထဲ ကျွန်မ တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်စဉ် ၁ က အရေးအကြီးဆုံး မဟုတ်သလို အမှတ်စဉ် ၉ ကလည်း အရေးသိပ်မပါတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
၁။ ကျွန်မ ချစ်သူက လက်ရေး လှရမယ်။
ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်က လက်ရေးမလှပေမဲ့ ကျွန်မချစ်သူ/ဘ၀ လက်တွဲဖော် ကိုတော့ လက်ရေးလှတဲ့သူပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူစာလေး ဖတ်ပြီး ကြည်နူးရမဲ့အစား လက်ရေးစုတ်နဲ့စာတွေကို မနည်း လိုက်ဖတ်နေရမယ်ဆိုရင် မနိပ်သေးဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မ ကံကောင်းပါတယ်။ လက်ရေးလှတဲ့သူတွေနဲ့ပဲ တွေ့ရလို့။ သူကလည်း လက်ရေး အရမ်းလှတယ်။ နောက် ကြုံမှ သူ့လက်ရေးကို စကန်ဖတ်ပြီး ကြွားတော့မယ် သိလား။ :P
၂။ စာလုံးပေါင်း မှန်တဲ့သူပဲ ဖြစ်ရမယ်။
ဟိ... ဒါလေးကိုတော့ ခု ခြွင်းချက် ထားလိုက်ပြီ။ ဘာလို့ဆို ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကိုက တချို့ စာလုံးတွေ ဘယ်လို ပေါင်းရမှန်း မသိတော့ဘူး။ တခါတလေ -ျ နဲ့လား၊ြ- နဲ့လား၊ -တ်နဲ့လား၊ -ပ်နဲ့လား စသဖြင့် မသေချာ၊ မရေရာ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်လာတာတွေ များတဲ့အခါ သူ စာလုံးပေါင်း နည်းနည်း မှားတတ်တာကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကလိုသာဆို ဘယ်ရလိမ့်မလဲ။ စာလုံးပေါင်းမှားတဲ့သူဆို ဘယ်လိုမှ အထင်ကြီးလို့ကို မရတာ။
၃။ ဂစ်တာ တီးတတ်ရမယ်။
ကျွန်မက Guitar ကို တော်တော် crazy ဖြစ်တယ်။ ဂစ်တာသံကြားလိုက်ရင် ဘယ်လို၊ ဘယ်လို သဘောကျမှန်း မသိဘူး။ တီးဝိုင်းက မြိုင်ဆိုင်တဲ့ သံစုံထက် ဂစ်တာသံကို ပိုနှစ်ခြိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ဂစ်တာ အရမ်းတီးတတ်ချင်တယ်။ တလလောက်တော့ ဂစ်တာတီး နည်းနည်း သင်ဖူးပေမဲ့ ကျွန်မ Profile မှာ ရေးထားသလိုပဲ ကျွန်မက ဆန္ဒသာရှိပြီး ဖြစ်မြောက်အောင် မကြိုးစားဖြစ်ဘူး။ အကြောင်း အကျိုး မညီညွတ်သေးလို့လည်း ပါမှာပေါ့လေ။ ကျွန်မ ကံမကောင်းတာ တချက်ကတော့ သူက ဂစ်တာကို ဟုတ်တိပတ်တိ မတီးတတ်ပါဘူး။ ကျွန်မထက် သာတယ်ပြောလို့ရတဲ့ ဒေါင်ဒင်၊ ဒေါင်ဒင်လောက်ပဲ တီးတတ်တယ်။ နည်းနည်းလေး ကျင့်လိုက်ရင်တော့ သူ ကောင်းကောင်း တီးတတ်သွားမှာပါ။ ခုလောလောဆယ်တော့ သူ တီးတတ်တဲ့ တပုဒ်တည်းသော သီချင်းလေးကိုပဲ ကျွန်မ အမြဲ နားထောင်နေရပါတယ်။
ကျွန်မ အဖေက ပြောတယ်။ ပညာတတ်အောင် စာတွေ သင်ပေးတယ် ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အမှား၊ အမှန် ဝေဖန် ပိုင်းခြားနိုင်အောင်လို့တဲ့။ ပိုက်ဆံက အဓိက မဟုတ်ဘူး။ ပညာတတ်တစ်ယောက် အသိဥာဏ်မျိုးရဖို့ ငွေပေးလို့မရဘူးတဲ့။ ပညာတတ်ရင် ပိုက်ဆံရှာရ လွယ်ပါတယ် လို့လည်း ပြောတတ်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ငွေကြေးချမ်းသာပြီး ပညာမရှိတဲ့လူမျိုးနဲ့တော့ ကျွန်မ မတွေ့မှာ သေချာပါတယ်။ အဲလိုလူမျိုး အထင်သေးတတ်လွန်းလို့။
၅။ ဥာဏ်ကောင်း၊ စာတော်ရပါမယ်။
ဒါက ငယ်ငယ်က တွေးထားတာဆိုတော့ တော်တော်လေးတော့ ကလေးဆန်နေမလားပဲ။ ကျွန်မက စာမတော်၊ စာမကြိုးစားတဲ့သူဆို အပေါင်းအသင်းတောင် လုပ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူးရယ်။ ခုတော့ အဲလောက်လည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အပျင်းကြီးပြီး စာ သိပ်မလုပ်ချင်တော့တာလည်း ပါမှာပေါ့။:P ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိရင်တော့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို အေးဆေးယှဉ်နိုင်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ထားပါတယ်။:D ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားလေး အများစုက ဥာဏ်ကောင်းကြတဲ့သူ များပါတယ်။ သူသည်လည်း တစ်ယောက်အပါအ၀င်ပေါ့။
၆။ အရပ်ပုတဲ့သူ မဖြစ်ရဘူး။
ကျွန်မက အရပ် ၅ ပေ ကျော်ကျော်သာ ရှိသော်လည်း ကိုယ့်ချစ်သူကိုတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ အရပ်ပုတဲ့သူ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ ၅ ပေ ၆ လောက်ဆိုရင်တောင် ပုတယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် အနည်းဆုံး ၅ ပေ ၇ လက်မ ရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ကံကောင်းစွာပဲ ကျွန်မရဲ့ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာတောင် အရပ်ပုတဲ့သူ မပါပါဘူး။ အရပ် ၅ ပေ ၈ ကနေ ၆ ပေ ထိ ရှိကြတဲ့ သူတွေကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ၅ ပေ ၈ နဲ့ ကပ်သီးလေး လွတ်သွားပါတယ်။ ;)
၇။ ရုပ်ရည်ကတော့ အဓိက မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ဓာတ်ကောင်းဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ရုပ်ချောခြင်း၊ ရုပ်ဆိုးခြင်းက ကျွန်မကို ဘယ်လိုမှ မလွှမ်းမိုးနိုင်ပါဘူး။ ယောက်ျားတစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကသာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဘ၀င်မြင့်၊ ကြွားဝါ၊ လေကြီးမိုးကြီး ပြောတတ်သော ယောက်ျားများကို အရမ်းမုန်းပါတယ်။ ရုပ်ချောချော မင်းသားတွေ၊ ကောင်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးမယဉ်တတ်တာ ငယ်ငယ်တုန်းထဲကပါပဲ။ အဲလို ပြောတဲ့အတွက် သူ့ကို မချောဘူး မထင်ကြနဲ့နော်။ သူက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာ။ မယုံ အန်တီငြိမ်းကို မေးကြည့်။:P
၈။ ကိုယ်က ချစ်တဲ့သူ ဖြစ်ရမယ်။ ကိုယ့်ကိုလည်း ချစ်တဲ့သူ ဖြစ်ရမယ်။
ဒါက အရေးကြီးတယ်လေ။ ကျွန်မ မချစ်တဲ့သူတော့ ဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားပြီး ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာမျိုး ဘယ်တော့မှ မဖြစ်နိုင်။ တချို့က ပြောကြတယ်။ ကိုယ်ချစ်ကို မရှာနဲ့၊ သူချစ်ကိုရှာတဲ့။ ကျွန်မကတော့ အဲဒီအဆိုကို လုံးဝ မထောက်ခံပါဘူး။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကပဲ ကိုယ့်ကို စိတ်ချမ်းသာမှု ပေးနိုင်မှာလေ။ ကိုယ်မချစ်တဲ့သူက စိတ်ဒုက္ခ လာပေးတာထက် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက စိတ်ဒုက္ခပေးတာကို ပို သည်းခံနိုင်မယ် ထင်ပါရဲ့။ သေချာတာက ကျွန်မ အချစ်ကို မကိုးကွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မရှိမဖြစ်လို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။
၉။ ကျွန်မထက် အသက် ၁နှစ် ကြီး၊ ၁ နှစ် ငယ်၊ ရွယ်တူပဲ ဖြစ်ရမယ်။
ကျွန်မက ကိုယ့်ထက် အသက်အများကြီး ကြီးတာကို သဘောမကျပါဘူး။ ကိုယ့်ကို ဆရာလုပ်မှာစိုးလို့ရယ်၊ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကြိုက်လို့မရတာကြောင့်ရယ်ပါ။ မိန်းကလေး အတော်များများ ကိုယ့်ထက် အသက် ငယ်သူကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ မွေးတဲ့ကျွန်မကို အမေက ကျောင်းစောထားချင်ပေမဲ့ (ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတိုင်း စာစသင်ဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အသက်အရွယ်မှသာ) စာသင်ရမယ့်အရွယ်မှသာ စာသင်စေချင်တဲ့ အဖေက နောက်ကျပြီး ထားလည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ ၅ နှစ်ခွဲမှာမှ ကျောင်းစနေရတဲ့ ကျွန်မနဲ့ ၄ နှစ်နဲ့ ကျောင်းစောတက်တဲ့သူ အသက် ၁ နှစ်ခွဲ ကွာကြသော်လည်း အတန်းတူတဲ့အတွက် ရွယ်တူလို့ သဘောထားပါတယ်။:P ကျွန်မက ဆရာကြီး လုပ်ချင်တဲ့အခါ "ငါက နင့်ထက် လူအရင် စောဖြစ်တာ။ လျှာမရှည်နဲ့။"လို့ ပြောတတ်ပြီး တခါတခါ ကျွန်မကို အနိုင်မပေးရင်တော့ "အမယ်... အသက်လေး ၁ နှစ်ကျော်လောက် ကွာတာနဲ့များ သူက ငါ့ကို အလျှော့ပေးစေချင်သေးတယ်။ လာလုပ်မနေနဲ့။ မရဘူး။"လို့ ပြောရတာ အရမ်းကို အရသာ ရှိလှပါတယ်။;))
၁၀။ လူမျိုးတူ၊ ဘာသာတူပဲ ဖြစ်ရပါမယ်။
လူမျိုးတူ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသား အားလုံးကို ကျွန်မနဲ့ လူမျိုးတူလို့ ယူဆပါတယ်။ ဘာသာကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့။
၁၁။ ကိုယ့်မိဘတွေအပေါ် လေးလေးစားစား ဆက်ဆံတတ်တဲ့သူ ဖြစ်ရမယ်။
သူကတော့ သူ့မိဘတွေကို ချစ်ခင်တတ်ရုံတင်မက၊ ကျွန်မကိုလည်း "မိဘတွေကို စိတ်မဆိုးရဘူးနော်။ စိတ်ဆင်းရဲအောင် မလုပ်ရဘူးနော်။ ဘာမှ သွားမပြောရဘူးနော်"လို့ တတွတ်တွတ် မှာတတ်တဲ့သူ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မ ကံကောင်းတယ် ဆိုရပါမယ်။
၁၂။ အလောင်းအစားကတော့ မလုပ်လေ ကောင်းလေပါပဲ။ အရက်၊ ဆေးလိပ်ကတော့ အလွန်အကျွံမဟုတ်ရင် ရပါပြီ။ ဆေးလိပ်နံ့မခံနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်အနားမှာ လာမသောက်ရင် ပြီးတာပဲ။ အရက်သမားကိုတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မချစ်ခင်နိုင်ပါ။ မကောင်းတဲ့သူကို ကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှ ပြုပြင်မယ်ဆိုတဲ့ သူရဲကောင်းဆန်ဆန် ပေါတောတော အတွေးမျိုးတော့ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ဗီဇကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ တော်တော် မလွယ်ကူဘူးဆိုတာ သိလို့ပါ။
၁၃။ ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ် အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ လူလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်မှတ်ထားရင် စောင့်ထိန်း၊ ကျင့်သုံးသင့်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက် လက်တွဲဖော်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်တင်မဟုတ်၊ ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက် သားသမီးတွေအတွက်ပါ အရေးကြီးတဲ့သူ ဖြစ်လေတော့ မိသားစုကို ခင်တွယ်တဲ့သူ၊ မိသားစုအပေါ် မဖောက်ပြန်ဘဲ သစ္စာရှိတဲ့သူ ဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်သေးတာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မရဲ့ သဘောထားကို မိန်းကလေးများနှင့် ရွေးချယ်ခွင့် ဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
တကယ်တော့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးလှတဲ့ လက်တွဲဖော်ကို ရွေးချယ်တာ ဒီထက်မက လိုအပ်တာတွေ ရှိဦးမှာပါ။ အချိန်မရတော့တဲ့အတွက် ဒီလောက်ပဲ ရေးလိုက်တော့မယ်။
နောက်ထပ် ကျွန်မ တက်ဂ်မယ့်သူတွေက ထုံးစံအတိုင်း :D
မှတ်ချက်15 ခု ရေးပြီးချိန်: 3/20/2008 01:48:00 AM
စာရေးသူ: s0wha1 Labels: ကူးယူးဖော်ပြခြင်း, အဖေနဲ့ အမေ
Forward Mail တခုရတယ်။ ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ ၀မ်းနည်းပြီး ငိုချင်တယ်။ အဲလို သားမိုက်၊ သမီးမိုက်တွေ ဘယ်လောက်တောင် ရှိလဲ မပြောတတ်ဘူး။
I confronted her that day and said, " If you're only goanna make meaLaughing stock, why don't you just die?"
I was happy with my life, my kids and the comforts, Then one day, my Mother came to visit me.
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 3/19/2008 11:16:00 PM
မှတ်ချက်10 ခု ရေးပြီးချိန်: 3/17/2008 11:42:00 PM
ရုတ်တရက် လေဖြတ်ခံရသော လူနာအတွက် သွေးဖောက်ပြီး အမြန်ကယ်ဆယ် ပြုစု ကုသနည်း
ရုတ်တရက် လေဖြတ်ဝေဒနာ ခံစားရသောသူတွေအတွက် ရှေးဦးသူနာပြုစုကုသနည်း လက်ကမ်း စာရွက်ထဲကနေ ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ပထမ အရေးကြီးဆုံးအချက်
လေဖြတ်ခံလိုက်ရသော လူနာကို ဖြစ်သည့်နေရာတွင်ပင် ထားရမည်။ မည်သည့်နေရာကိုမျှ မပြောင်းပါနှင့်။ ချက်ချင်း ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပါက လှုပ်ရှားခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်သွေးကြောများ လျင်မြန်စွာ ပေါက်ကွဲပြီး လူနာ၏ အခြေအနေ ဆိုးဝါးလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဒုတိယ အရေးကြီးဆုံးအချက်
လူနာကို ဖြစ်သည့်နေရာ၌ပင် အသာအယာ ထူမပေးပြီး ပြန်၍ လဲကျမသွားစေရန် အသာမှိန်း၍ ထိုင်စေရမည်။ လူနာကိုယ်တိုင် မထိုင်နိုင်ပါက တစ်ဦးဦးက ဘေးမှ အသာမှေး၍ ထူမပေးရမည်။ ထူပြီးပြီးချင်း ပိုးသတ်ထားသော ဆေးထိုးအပ်ဖြစ်စေ၊ လက်ချုပ်အပ်ထိပ်ဖျားကို မီးရှို့၍ဖြစ်စေ လူနာ၏ လက်ဆယ်ချောင်း ထိပ်ဖျားများကို ပဲစေ့ခန့် သွေးစက် တစ်စက်စီ ထွက်လာအောင် ဖောက်ပေးရမည်။ သွေးစက် ပဲစက်ခန့် ထွက်၊ မထွက်ကို ခေတ္တ စောင့်ကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သွေးမထွက်လျှင် သွေးထွက်လာအောင် လက်ဖြင့် ညှစ်ထုတ်ပေးရမည်။ လက်ချောင်းအားလုံး ပဲစေ့ခန့် တစ်စက်၊ တစ်စက်စီ ထွက်လာပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း လူနာ ပြန်လည်၍ သတိရလာပါလိမ့်မည်။
၃။ တတိယ အရေးကြီးဆုံးအချက်
လူနာကို လေဖြတ်လျှင် ဖြတ်ချင်း ပါးစပ်ရွဲ့စောင်းသွားပါက ၄င်း၏ နားရွက်နှစ်ဖက်စလုံးကို နီရဲလာသည့်တိုင်အောင် လက်ဖြင့် ပွတ်သပ်ဆွဲပေးပါ။ နားရွက်နီရဲလာလျှင် နားရွက်၏ အောက်ပိုင်း နားဖောက်သည့်နေရာတွင် မီးရှို့ထားသည့် အပ်၊ ပိုးသတ်ထားသည့် ဆေးထိုးအပ်ဖြင့် နားရွက်တစ်ဖက်စီလျှင် နှစ်ချက်စီ ဖောက်ပေးပါ။ ပဲစေ့ခန့် သွေးစက် နှစ်စက် ထွက်လာပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ပါးစပ်ရွဲ့စောင်းခြင်းမှ ပြန်လည် တည့်မတ် ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မည်။
လူနာကို ပြုစုကုသပြီး ပုံမှန်အခြေအနေရောက်အောင် စောင့်ကြည့်ပါ။ ပြီးမှ ဆေးရုံသို့ ပို့ခြင်း၊ လိုအပ်သည့် ဆေးကုသမှုကို ခံယူရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါ။
အထက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါက အကြောသေခြင်း၊ ကိုယ်တခြမ်းသေခြင်း၊ ခြေ၊ လက် လှုပ်ရှား၍ မရခြင်း၊ စကား မပီသခြင်း စသည့် လူဖြစ်ရှုံးရမည့် ဒုက္ခိတ ဘ၀မှ ကင်းဝေးစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤနည်းမှာ လက်တွေ့ပျောက်ကင်းသောနည်းဖြစ်၍ လူအများ လေဖြတ်ခြင်းဘေးဒုက္ခမှ ကင်းဝေးကြစေရန် မေတ္တာ၊ စေတနာ ဖြူစင်စွာဖြင့် ကုသိုလ်အမှု ပြုလိုက်ပါသည်။ မိမိတို့၏ နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေများထံသို့ ထပ်ဆင့် ဖြန့်ဝေလှူဒါန်းခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ထူးကို ယူကြပါ။
ဤနည်းအတိုင်း လူနာကို ပြုစုကုသပေးခြင်းဖြင့် ရာနှုန်းပြည့် အောင်မြင်သော ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။
ဤကုသနည်းကို တရုတ်ပြည်မှ ပေးပို့ခဲ့သော ကုသနည်းမှ ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့ ကျွန်မ အဒေါ်တစ်ယောက် ညနေပိုင်းမှာ လေဖြတ်ဝေဒနာ ခံစားရတဲ့အခါ သားသမီးတွေကလည်း ဘာဖြစ်မှန်း မသိနဲ့ ဦးခေါင်းထဲ သွေးရောက်ပြီး ခွဲရ၊ စိပ်ရ ဒုက္ခတွေများလို့ နောက်ဆုံးတော့ အသက်မသေပေမယ့် ကိုယ်တပိုင်းသေဒုက္ခိတ ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်မှာ လူကြီးမိဘတွေရှိတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ဒီလို ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းကို သိရှိအောင် ကျွန်မ ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်လည်မျှဝေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အိမ်မှာလည်း ဒီစာရွက်ကို လူမြင်ကွင်းမှာ ကပ်ထားဖြစ်တယ်။
မှတ်ချက်2 ခု ရေးပြီးချိန်: 3/16/2008 08:39:00 PM
၈၈၈၈ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သီချင်းတွေကို YouTube မှာ တွေ့တာနဲ့ စုသိမ်းထားချင်လို့ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်မှာ တင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Link ကနေ တခုပြီးတခု ကြည့်လို့ရပါတယ်။
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 3/16/2008 11:53:00 AM
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 3/13/2008 10:58:00 AM
နှစ်၂၀ပြည့် တံတားနီအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရေးထားတဲ့ မမေမင်းဆက်ရဲ့ကဗျာလေးကို အီးမေးလ်ကနေ ကိုမင်းသစ်တည်က ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀ ... နွေရာသီ မတ်လအလယ်မှာ
ဒီနေရာ၊ ဒီတံတားဟာ သွေးစွန်းခဲ့တယ်။
လုံထိန်းတွေ ရှေ့နောက် ပိတ်ကာဝိုင်းလို့
ဟိုမှာတစ… ဒီမှာတစနဲ့ ပြန့်ကာကြဲလို့
တံတားပေါ်က ခုံတွေကို ခေါက်ကြည့်ရင်
မမြင်ဘူး၊ မတွေ့ဘူး၊ မမီလိုက်တဲ့ လူငယ်များ
မြင်ဘူး၊ တွေ့ဘူး၊ ကြုံဘူးခဲ့သူ လူလတ်များ
တမလွန်မှာ... စိတ်မအေးနိုင်ဘဲ ရှိနေသေးတဲ့ ၀ိညာဉ်များ
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၂၀... နွေရာသီ မတ်လအလယ်မှာ
ဒီကဗျာကို ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ တင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် မမေမင်းဆက်နဲ့ ကိုမင်းသစ်တည်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုဘုန်းမော်ပုံပါရှိသော နှစ်၂၀ပြည့် တံတားနီအထိမ်းအမှတ် ဓာတ်ပုံကို ကိုနစ်နေမန်း ဘလော့ဂ်ကနေ ရရှိပါတယ်။
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 3/12/2008 10:50:00 PM
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်က ကျွန်မအဖေ မလေးရှားက ပီနန်မြို့လေးမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းကို သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း အဲဒီအကြောင်း ရေးမယ်၊ ရေးမယ်နဲ့ ပျင်းနေတာနဲ့ ခုမှ ရေးဖြစ်တယ်။ အဲဒီကျောင်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရေးသားထားတဲ့ နံရံကပ်စာကို အားလုံးအတွက် မျှဝေချင်လို့ပါ။
ever that somebody
eventually you will beareal nobody
ကျွန်မ ဘာသာပြန်လိုက်ရင် မူရင်းဆိုလိုထားတာလေးကို အပြည့်အ၀မမှီမှာ စိုးတဲ့အတွက် ဒီတိုင်းလေးပဲ တင်လိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။
မှတ်ချက်2 ခု ရေးပြီးချိန်: 3/10/2008 11:50:00 PM
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 3/09/2008 10:45:00 PM
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 3/08/2008 11:27:00 PM
ကျောင်းတုန်းကအကြောင်းတွေ ဆက်ရေးချင်သေးလို့ ထပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
မှော်ဘီ GTC မှာ ကျောင်းတက်တုန်းကအကြောင်းပြောရင် ပဲခူးမြို့ဆိုတာ ကျွန်မတို့ ခြေရာတွေထပ်ခဲ့တဲ့ နေရာတစ်နေရာအဖြစ် ပြောဖို့ကျန်ခဲ့လို့ မဖြစ်ဘူး။ ပဲခူးဘက်ကို ပဲခူးဘုရားဖူးဆိုပြီး မကြာမကြာ သွားကြတယ်။ ပဲခူးသူ သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်ကလည်း မှော်ဘီမှာ လာတက်နေတော့ သူ့အားကိုးနဲ့ သွားကြတာလည်း ပါတာပေါ့။ ကားကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး ကျောင်းတက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ကားတွေနဲ့ သံလျင် GTC ဘက်ထိလည်း ခြေဆန့်တတ်ကြပါသေးတယ်။ လူက ညီတော့ တော်တော်လေး ပျော်ဖို့ကောင်းသား။
ဧပြီလရောက်ပြီဆို သင်္ကြန်မကျသေးပေမယ့် ရေပက်ကြတာ ကျောင်းတိုင်းလိုလိုဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်မတို့လည်း အဲဒီချိန်ဆို သောကြာနေ့တိုင်း တကျောင်းလုံး ရေတွေ ရွှဲရွှဲဆိုနေအောင်ကို ကဲကြပါတယ်။ ဒါတောင် ကိုယ်နဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးသူတွေကိုပဲ လိုက်ပက်သေးတာ။
တမြို့နယ်ထဲကဖြစ်တဲ့ ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်းတွေ GTC ရောက်မှ ပေါင်းဖြစ်ကြပေမယ့် ကျောင်းအားရက်နဲ့ ကျောင်းပြန်ချိန် ညနေဘက်တွေမှာ တစ်ယောက်အိမ်တစ်ယောက် ကားတွေနဲ့ လှည့်ပတ်သွားပြီး လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖို့ လူစုတတ်ပါတယ်။ တခါတလေလည်း တခြားမြို့နယ်က သူငယ်ချင်းတွေဆီ သွားလည်ကြတယ်။
နောက်ပိုင်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ မြို့ပြင်လယ်ကွင်းပြင်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး စာသင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ တဆင့်ထက်တဆင့် တိုးတိုးလာတဲ့ ချုပ်ချယ်တားမြစ်မှုတွေကြောင့် ကျောင်းနဲ့မတူတဲ့ အကျဉ်းထောင်ပမာ စာသင်ခန်းတွေထဲမှာ ရုန်းထွက်မရ ဖြစ်နေတော့တယ်။ မှော်ဘီမှာတက်နေတဲ့ နောက်ဆုံးအသုတ် YTU ကျောင်းသားတွေ လှိုင်သာယာ ပြောင်းသွားတဲ့အခါ ဆရာမကြီး ဒေါ်တိုးတိုးက ပညာပြပါတော့တယ်။ မနက် ကျောင်းတက်ချိန် နောက်မကျရ၊ စာသင်ချိန်မှာ ကျောင်းသားတွေ အပြင် ကော်ရစ်တာ၊ ကန်တင်းတွေမှာ ရှိမနေရစတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းထက် ဆိုးတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေ ထုတ်လာတယ်။ စကတ်အကွဲ မ၀တ်ရ၊ ဘာမ၀တ်ရ၊ ညာမ၀တ်ရတွေ လုပ်လာပါတယ်။ တခြားကျောင်းကလူတွေ မှောဘီကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေဆီ လာလည်တော့ သူတို့က စကတ်အတို၊ အရှည်အကွဲတွေ ၀တ်လာကြတယ်။ အဲဒီအခါ အရှက်ကိုမရှိဘူး။ အကျင့်ပျက် ယဉ်ကျေးမှု ဘာညာနဲ့ ပြောဆို လွှတ်တဲ့အထိ ဆိုးသွမ်းလှပါတယ်။
နောက်တော့ တနင်္လာ၊ သောကြာကို အကျီအဖြူ မ၀တ်မနေရဆိုပြီး ပြောလာတယ်။ မ၀တ်လာတဲ့သူက ကျောင်းဝန်းထဲ ၀င်ခွင့်မရှိပါတဲ့။ အဲဒီတုန်းက အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့အမိန့်တွေ၊ ကန့်သတ်ချက်တွေဆို ဆန့်ကျင်လိုတဲ့အတိုင်း ကျွန်မကတော့ တခြားနေ့တွေသာ အင်္ကျီအဖြူ ၀တ်ချင်ဝတ်မယ်။ တနင်္လာနဲ့ သောကြာဆို တမင် မ၀တ်ဘဲ ကျောင်းကို သွားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျောင်းပေါက်ဝက ဆရာတွေက ကျောင်းထဲ ပေးမ၀င်ပါဘူး။ မ၀င်ရတော့ ဘာဖြစ်လဲ အပြင်ဘက်က ကန်တင်းတွေမှာ ထိုင်နေလိုက်တာပေါ့။ ၀င်ခွင့်မရတဲ့ တချို့သူငယ်ချင်းတွေက ခြံစည်းရိုး ခွေးတိုးပေါက်လေးတွေကနေ ကျောင်းထဲ ၀င်ကြတယ်။ ခုတော့လည်း တက္ကသိုလ်တွေက ၀တ်စုံတွေနဲ့ကို ဖြစ်ကုန်တော့တာပါပဲ။
ပြီးတော့ ဆရာတွေကလည်း ကျွန်မတို့ထက် အသက် ၃၊ ၄ နှစ်လောက်သာ ကြီးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ ငယ်ငယ်လေးတွေ များပါတယ်။ အများစုက GTI Diploma လက်မှတ် ရထားတဲ့သူတွေပါ။ ကျောင်းတွေက များ၊ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ ဆရာက နည်း၊ ဒီတော့ BE ဘွဲ့မရပေမယ့် Diploma အောင်လက်မှတ်ရှိရုံနဲ့ သင်တန်း အနည်းငယ်ပေးပြီး ဆရာတွေ ပြန်လုပ်ခိုင်းဆိုတော့ ကျွန်မတို့ဆရာ တချို့က စာသွားမေးရင် ပြန်မဖြေတတ်တာ များပါတယ်။ workshop လို့ခေါ်တဲ့ လက်တွေ့ချိန်တွေမှာဆို သစ်သားတွေ ရွေဘော်ထိုး၊ အုတ်နီခဲနဲ့သဲကို နံရံပုံစံ စီထပ် စသဖြင့် ခက်ခဲ၊ အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ ပညာရပ်တွေ သင်ကြားရတယ်။ ကျွန်မတို့ကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငါဟဲ့ Civil Engineer ဆိုပြီး ကလေးကစားသလို ပျော်ပျော်ကြီးကို လုပ်ကြတာပေါ့။ Drawing ချိန်ဆိုရင်တော့ အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း TSquare ကြီးတွေနဲ့ မတ်တပ်တွေရပ်ပြီး ပုံတွေလိုက်ဆွဲရတာလည်း ပျော်စရာ။ ဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာမှ မရှိနိုင်တော့တဲ့ သင်ကြားနည်းပုံစံတွေနဲ့ တော်တော်ကို ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းလှတယ်။ :P
နောက်ထပ် စိတ်ပျက်စရာ တခုရှိပါသေးတယ်။ ၁၀တန်းတုန်းက အမှတ် ၄၀၀ကျော်ရပြီး ဆေးကျောင်း စိတ်မ၀င်စားတဲ့အတွက် YTU မရှိတော့သော်လည်း ဒုတိယနှစ် အမှတ်ကောင်းရင် YTU ကို join နိုင်တဲ့ GTC ကို လာတက်ကြတဲ့သူ တော်တော်များများ GTI အောင်လက်မှတ်နဲ့တင် နိတ္ထိတန်သွားကြတာပါ။ ၁၀တန်းမှာ အမှတ် ၂၉၀ ကျော်၊ ၃၀၀ လောက်ပဲ ရတဲ့သူတွေက BE ထိပါသွားကြတာကို မြင်ရ၊ ကြားရတဲ့အခါ မတရားသလို ခံစားရပါတယ်။ ၁၀တန်းတုန်းက ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကြိုးစားမှုတွေက အလကား သဲထဲရေသွန်ဖြစ်ကုန်တာကတော့ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါပဲ။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမှာ စာအသားကုန် လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ တက္ကသိုလ်တက်ချိန်မှာတော့ နည်းနည်းပါးပါး ပျော်ချင်ကြတာ သူတို့အလွန် မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။
ဩော် ပြောရရင်တော့ ပြောစရာတွေက မကုန်တော့ဘူး။ ပြောချင်တော့ပါဘူး။ စိတ်ပျက်လို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်လိုက်တော့မယ်။
မှတ်ချက်3 ခု ရေးပြီးချိန်: 3/03/2008 03:16:00 AM
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ကျွန်မကို Forwar Mail ပို့ပေးထားတာလေးကို ကျွန်မနှစ်သက်လို့ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်တင်လိုက်တယ်။ ဘယ်သူရေးထားမှန်းမသိသလို၊ ဘယ်စာစောင်မှာ ပါထားမှန်းလည်း မသိပါဘူး။ အဲဒီအတွက် မူရင်းရေးသူထံလည်း ခွင့်မတောင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီမှာ... ကလေးတွေအတွက် စာသင်ခုံတွေ အလုံအလောက်မရှိပေမယ့်
အလုပ်လက်မဲ့တွေအတွက် ဘိလိယက်ခုံတွေ အလုံအလောက်ရှိတယ်။
အဲဒီမှာ... ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ၀င်ဆန့်ဆက်ဆံဖို့ အင်တာနက်ကဖေးတွေ မရှိပေမယ့်
ကိုယ့်နွားခြေရာခွက်ထဲမှာ တကိုယ်တော်ရွက်လွင့်ဖို့ စည်ဘီယာဆိုင်တွေ ရှိတယ်။
အဲဒီမှာ... အိပ်မက်တွေအတွက် မနက်ဖြန်မရှိပေမယ့်
အဲဒီမှာ... ရိုးရိုးကျင့် မြင့်မြင့်ကြံဖို့ ရောင်းကောင်းရောင်းဝယ် ဈေးကွက်မရှိပေမယ့်
ဒီကွေ့ ဒီတက်နဲ့ လှော်ဖို့ အပေါင်ဆိုင်တွေ ရှိတယ်။
အဲဒီမှာ... (မရှိပေမယ့်).............( ရှိတယ်)
ဘောလုံးနဲ့ ဘင်လာဒင်ကို ဘုရားစင်မှာ တင်ထားတဲ့ ဂျာနယ်တွေရှိတယ်။
ဖွင့်ထားတဲ့ ကြယ်ငါးပွင့် ဟော်တယ်ကြီးတွေရှိတယ်။
ပြီးတော့... သေနတ်နဲ့ ပိုက်ဆံပေါင်းထားတဲ့ တရားဥပဒေရှိတယ်။
ရေဒီယိုနဲ့ ကောလဟာလပေါင်းထားတဲ့ မျှော်တလင့်လင့် နိုင်ငံရေးရှိတယ်။
စာပေစီစစ်ရေးနဲ့ ထောင် ပေါင်းထားတဲ့ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်။
အမှားတွေ ပျောက်မလားလို့ တံတားတွေ ဆောက်ထားတာရှိတယ်။
မြို့ပြင် လယ်ကွင်းပြင်ကြီးထဲ ထုတ်ထားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကြီးတွေနဲ့
ဆရာတွေ လက်ပတ်ဝတ် ကင်းစောင့်နေတဲ့ အေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားရေးရှိတယ်။
ပြီးတော့... အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် မထွက်ရဲတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့
ပြီးတော့... တရုတ်တန်းဖြစ်သွားတဲ့ နန်းတော်တစ်ခုရှိတယ်... ရှိတယ်...
မှတ်ချက်3 ခု ရေးပြီးချိန်: 3/02/2008 10:23:00 AM